शुरुआतीहरूको लागि फूल बगैंचा सम्बन्धी सल्लाहहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - HOME-N-বাগান
शुरुआतीहरूको लागि फूल बगैंचा सल्लाह
घर होम एन बगैचा बागवानी बागवानी oi-Asha द्वारा आशा दास | प्रकाशित: शनिबार, डिसेम्बर १,, २०१ 2015, १:30::30० [IST]
बागवानी तपाईंलाई आकर्षक र सक्रिय राख्नको लागि एक राम्रो शौक हो। साथै, यदि तपाइँ बगैंचामा एक पेशेवर दृष्टिकोण लिनुहुन्छ, तपाईं यसलाई पनि आय को एक राम्रो स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको यार्ड कति ठूलो छ वा छैन, फूल बगैचा बनाउनु सजिलो काम हो जब तपाईं रचनात्मक सोच्नुहुन्छ।
एक अनुभवी बगैंचा प्रेमीले मात्र ध्यान दिनु पर्छ बगैंचा कायम राख्ने राम्रो। तर, एक शुरुआतीको रूपमा, तपाईंले धेरै आधारभूत चीजहरूको ख्याल राख्नु पर्छ जुन तपाईंको प्रयासको सफलतालाई निर्धारित गर्दछ। यसले धेरै चीजहरू समावेश गर्दछ जुन ल्याण्डस्केपि fromदेखि लिएर सबै मौसममा फूलहरूको ख्याल राख्ने कार्यमा समावेश छ।
तपाइँ आफ्नो सपना बगैंचा बनाउन धेरै रचनात्मकता र वैज्ञानिक ज्ञान राख्नु पर्छ। तपाईको पहिलो फूल बगैचा ट्रायल शुरू गर्नुहोस् र तपाईको घर प्रकृतिलाई आमन्त्रित गरेर प्राप्त भएको सन्तुष्टि लाई प्रशंसा गर्नुहोस्।
एक शुरुआतले अन्तिम परिणाम प्राप्त गर्न धेरै परीक्षण र त्रुटि प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्नेछ। शुरुआतीहरूको लागि फूल बगैंचा सम्बन्धी सुझावहरूमा यस लेखले तपाईंलाई केही सम्भावित र अपेक्षित बागवानी गल्तीहरू छोड्न मद्दत गर्दछ।
कसरी दीपिका पादुकोण कपाल बनाउने
बगैंचा अन्तरिक्ष को चयन
तपाईंको बगैचाको लागि राम्रो क्षेत्र छनौट र डिजाइन गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा आवश्यक गुणहरू हुनुपर्दछ जसले बोटको वृद्धिलाई राम्रो देखावट, स्वस्थ माटो, राम्रो पानी कायम गर्ने क्षमता, जमिनको सामान्य पानी स्तरबाट उचित उचाइ र पर्याप्त सूर्यको प्रकाशलाई समर्थन गर्दछ।
कसरी आफ्नो छाती को आकार को प्राकृतिक रूप बाट कम गर्ने
तपाईंको फूल बगैचाको लागि राम्रा भाँडो छनोट गर्नु तपाईंको बगैंचालाई सुन्दर राख्न मात्र होइन तर तपाईंको बोटको स्वस्थ बृद्धिलाई पनि समर्थन गर्दछ। तपाईंले छनौट गर्नुभएको बिरूवाको प्रकारमा निर्भर बर्तनहरू छनौट गर्न सम्झनुहोस्, र यसको पूर्ण वृद्धि पछि यसको अन्तिम अपेक्षित आकारमा विचार गर्नुहोस्।
सायद, बगैंचाको लागि बिरुवाहरू छनोट गर्नु शुरुवातका लागि सबैभन्दा भ्रामक र अचम्मको कुरा हो। त्यहाँ जलवायु, मौसम, माटोको पानी बोक्ने क्षमता, कीटनाशक आक्रमणको सम्भावना र फूलहरूको रंग जस्ता धेरै कारकहरू विचार गर्न सकिन्छ।
कागतीको रौं कपालको लागि राम्रो हुन्छ
पहिले माटो तयार गर्नमा विफलता धेरै कारणहरूको प्रयासमा असफल हुनुको एक मुख्य कारण हो। पर्याप्त मल वा कम्पोस्ट मिक्सको साथ माटो तयार गर्न समय लिनुहोस्। साथै, यदि माटोमा पानीको राम्रो क्षमता छैन भने यसलाई बढाउन उत्पादनहरू थप्नुहोस्। रोपण एक उत्तम माटो तयारी पछि मात्र गर्नुपर्छ।
निषेचन तपाईको बोटको स्वस्थ बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण छ। प्रत्येक बोटको बिभिन्न विकास आवश्यकताहरू हुन्छन्, र तपाईंले यस तथ्यको आधारमा आफ्नो फूलको बोटलाई निषेचन गर्ने आवृत्ति निर्णय गर्नुपर्दछ। साथै, खाद्यान्नको आवश्यक मात्रा बारे पनि जान्नुहोस्। जैविक मलको प्रयोग उत्तम विकल्प हो।
बोटको पानी आवश्यकताहरू बोटको प्रकार र मौसममा निर्भर गर्दछ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण बगैंचा सम्बन्धी सुझावहरूमध्ये एउटा तपाईंको बोटबिरुवाहरूको पानी आवश्यकतामाथि नजर राख्नु हो। धेरै र धेरै थोरै पानीले तपाईंको बोट बिगार्न सक्छ।
एक अनलाइन फोरममा शामिल हुनुहोस्
तपाईं बगैचा स्थापना गरिसकेका अनुभवी व्यक्तिहरूबाट शुरुवातकर्ताहरूको लागि फूल बगैंचा सल्लाहहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईंलाई सैद्धांतिक सल्लाह भन्दा बढी व्यावहारिक सल्लाह दिन सक्छन्। फोरममा सामेल हुनाले फूल बगैचा बनाउने र त्यसलाई कायम राख्ने कुरामा तपाईंको सबै श doubts्का हटाउन मद्दत गर्दछ
के तपाईंसँग बढि फूल बगैचा सुझावहरू वा शुरुवातकर्ताहरूको लागि सुझावहरू छन्? ती हामीलाई साझा गर्नुहोस्!
कसरी पम पढेर भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने
उपन्यास सारांश दुई पटक प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ
कसरी मुखको अन्धकार हटाउने
यूरिक एसिड कम गर्न घरेलु उपचार
रातो हरी चियाका फाइदाहरू
honey दिनमा तौल घटाउन मह खानाहरू